တစ်နှစ်အောက် ကလေးများကို လျှပ်စစ် ဖန်သားပြင်များ ပြသခြင်းမပြုရန် WHO အကြံပြု - Yangon Media Group
ဂျီနီဗာ၊ ဧပြီ ၂၅
ကလေးငယ်များအနေဖြင့် တစ်နေ့လျှင် တစ်နာရီထက်ကျော်လွန်ပြီး ရုပ်သံဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစား ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ဘဲ အသက်တစ်နှစ်အောက်ငယ်သော နို့စို့ ကလေးငယ်များအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဖန်သားပြင်များကို လုံးဝကြည့်ရှု ခြင်းမပြုရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO က ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပထမဆုံး ညွှန်ကြားချက်အ နေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကအသက်ငါးနှစ်အောက် က လေးများသည် တစ်ဘဝစာကြာ မြင့်မည့်အကျင့်များ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကူညီရန်၊ ဘဝနှောင်းပိုင်းတွင်အဝလွန်မှုနှင့် အခြားရောဂါဘယများ ကိုကာကွယ်ရန်အတိအကျ အိပ်စက်သင့်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တက်ကြွမှု ရှိနေသင့်သည်ဟုဆိုသည်။
WHO မှ ကျွမ်းကျင်သူ ဖီအွန်နာဘူးလ်က ”ကျွန်မတို့ဘာကို သတိထားမိလဲဆိုတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေဟာ လျှပ်စစ်ဖန်သားပြင်ကို အချိန်များများအသုံး ပြုနေတာကိုပါပဲ” ဟု ပြောဆိုထားသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံသို့ပေးပို့သော လမ်းညွှန်ချက်များထဲတွင် WHO က အသက်တစ်နှစ်မှလေး နှစ်ကြားရှိကလေးများသည် တစ် နေ့တာတွင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားအတွက် အနည်းဆုံးအချိန်သုံးနာရီကုန်ဆုံးသင့်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ အသက် တစ်နှစ်အောက် နို့စို့အရွယ်ကလေးများသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကစားရသည့် ဂိမ်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်ပြီး ဖန်သားပြင်များ အားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်းလည်း ဖော် ပြထားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လွဲမှားသည့်အပြု အမူကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အဝလွန်သူနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် လွန်ကဲသူ အရေအတွက်တိုးမြင့်လာသည်ဟုလည်းဆိုသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် လွန်ကဲမှုသည် နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုးနှင့် အခြားကင်ဆာများကြောင့် အချိန်မတိုင်မီသေဆုံးခြင်းဆီသို့ ဦးတည် စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဒေါက်တာဘူးလ်က ”အဲဒီသေဆုံးမှုတွေ ကိုကာကွယ်ဖို့ ကနဦးဘဝအစမှာ ကတည်းက လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ သုံးဦးတွင်တစ်ဦးသည် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လွန်ကဲခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းဖြစ် ပေါ်နေပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လေးဦးတွင်တစ်ဦးမှာ လုံလောက်သည့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အလုံ အလောက်မရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အကျယ်အဝန်း ပမာဏရှိ အပူပိုင်းသစ်တောများ ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း အ??
ဖြူးမြို့အနီး ပဲခူးရိုးမကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အားပြင်း ငလျင် လှုပ်ခတ်၊ ငလျင်ကြောင့် ဆည်တမံမျာ??
ချန်ပီယံလိဂ်တွင် အုပ်စုပွဲစဉ်တိုင်း ဂိုးသွင်းယူနိုင်သူအဖြစ် စီရော်နယ်ဒို စံချိန်တင်